Paul Pogba Oo Weerar Culus Ku Qaaday Qaab Ciyaareedka Jose Mourinho Iyo Khilaafkoodii Oo Cirka Isku Shareeray | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Published on September 24, 2018 by Caydiid Cabdi Raxmaan Aadan · No Comments ·
(25-9-2018) Xidiga xulka qaranka France iyo kooxda Manchester United ee Paul Pogba ayaa halkiisa ka sii wata in aanu ku qanacsanayn hanaanka ciyaareed ee Jose Mourinho uu ka wado Red Devils wuxuuna markale saxaafada mariyay eedayn iyo waliba sida uu u saluugsan yahay tatikada Jose Mourinho ee aan weerarka badan ku dhisnayn.
Paul Pogba oo xili ciyaareedkan dhawr jeer saxaafada kala hadlay xaalada kooxdiisa isla markaana abuuray muran xoogan kadib markii uu hore wax uga sheegay maskaxda ciyaartoyda kooxdiisa oo uu naftiisa ka bilaabay, waxa uu markale ku celiyay in waxa kooxdiisa ka maqani yahay weerar ay si xoogan u qaadan.
Manchester United ayaa kadib guuldarooyinkii Brighton iyo Tottenham waxay soo wada guulaysatay saddexdii kulan ee ay martida soo noqotay ee Burnley, Watford iyo Young Boys laakiin waxay kulankii ugu danbeeyay barbaro Old Trafford kula galeen kooxda heerka labaad ka soo baxday ee Wolves.
Wuxuuna Pogba ka cadhaysan yahay in marka ay kooxdiisu ku ciyaarayso Old Trafford ay weerar badan ku ciyaarto isaga oo si toos ah dhaliin ugu soo jeediyay tatikada Mourinho isaga oo waliba tix raacaya kulankii ugu danbeeyay ee Wolves.
Paul Pogba ayaa yidhi: “Marka aanu joogno gurigayaga, waxaa waajib nagu ah weerar, weerar, weerar, kaasi waa Old Trafford. Waxaanu joognaa gurigayaga isla markaana waxaa waajib nagu ah in aanu u ciyaarno si ka fiican kulankii Wolves. Halkan waxaanu u joognaa in aanu weerar galno”.
Paul Pogba oo markale ka hadlaya sida haddii ay Mancheser United weerar ku ciyaarto ay kooxaha u cabsi galin kari lahayd ayaa yidhi: ” Waxaan filayaa in kooxuhu ay cabsadaan marka ay arkaan Mancheser United oo weerar ah, weerar ah, taasi qaladkayaga ayay ahayd”.
Laakiin Pogba oo u muuqda xidiga kaliya ee ka hadli kara qaabka maskaxeed ee ciyaartoyda kooxdiisa ayaa yidhi: “Laga yaabee in ay waajib ahayd in qaab fikirku uu sidaa ka fiicnaado, sababtoo ah markale waxaanu joognay Old Trafford, waxaana kaliya waajib nagu ahayd in aanu weerarno oo aanu u cadaadino sidii aanu samaynay kulamadii Tottenham, Liverpool, Chelsea iyo Arsenal ee xili ciyaareedkii hore”.
Paul Pogba ayaa ku dooday in marka ay weerar iyo cadaadis ku ciyaarayaan ay iyaga u sahlan tahay wuxuuna isaga oo fariintan Mourinho iyo ciyaartoyda kooxdiisa u diraya yidhi: “Marka aanu sidan u ciyaarno anaga way nooga sahlan tahay”.
Paul Pogba oo uu markii horeba khilaaf wayni ka dhexeeyay Jose Mourinho ayaa markale u muuqda in uu colaadan dab ku sii shiday inkasta waxa uu ka hadlay yahay waxa uu dareemayo taageere kasta oo Man United ahi si ay kooxdoodu guulo u gaadhi karto.